Ngobusuku obunothando ... Ukubambisana | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Ngobusuku obunothando ... ubambiswano
Amakhasi amaningi ngokubambisana
Ukuziphatha ngokocansi, ukucabanga nokukhanyisa
Uma emva kokuthandana okuphumelelayo nesigaba esilandelayo se-infatuation yokuqala, ukuphila kwansuku zonke kuzuza kancane, izikhathi ezivamile zothando zibaluleke kakhulu. Ngolunye usuku noma olunye ubusuku obuthandana bangenza isiqiniseko sokuthi uthando alulele. Kodwa amalungiselelo ambalwa kakade akwanele - ukucindezeleka akufanele kuphakame.
Indlela yokudala kusihlwa kothando - ukudala ubumbano
Uma kukhona izingane endlini, kusihlwa kusihlwa. Uma unethuba lokunikeza izingane kubantwana abancane ubusuku noma ukuvumela izingane ezindala zilale nabangani, kusihlwa kungenziwa kujabule kakhulu.
Nokho, izingane ezincane, ukungabi nabantwana obusuku bokuthandana ngokuvamile akuyona inkinga. Ngemuva kwalokho, balala embhedeni kakhulu, ukuze lo mdlalo ungene ngemuva kwalokho. Ngakho-ke lokho akuyona isikhathi esiningi kakhulu emthonjeni, kufanele wenze amalungiselelo ngaphambili.
Izithako zobusuku obuseduze
Akuwona wonke umuntu onomqondo ofanayo wokuthandana. Umculo ohambelana nokukhanya okucashile kubalulekile. Ngamakhandlela, qinisekisa ukuthi ayikho ingozi yomlilo. Okunye okunikezwayo okukhanyisa izibani ze-fairy. Amakhandlela amasha e-LED anikezela ukukhanyisa okulula, kepha akusiwo wonke umuntu ukunambitheka.
Umqondo omuhle kusihlwa sothando ngukudla okumnandi kokubili. With candlelight kanye ingilazi enhle yewayini masinyane kuza up isimo esihle. Itafula elihle kakhulu elihlelwe ngokushesha lidala ukuhlukahluka okuhlukile ngokuphelele kunakho konke kwansuku zonke.
Uma ungafuni ukupheka okunye, kodwa futhi ngokuhlwa okutholile kulesofa kulungile. Nge-backlight esheshayo, umhlobiso omuhle, isiphuzo esifanele ne-nibble encane, uzothola isiqalo esihle kusihlwa sothando. Kungakhathaliseki ukuthi ukhahlela, ukhuluma, ulalele umculo noma ubuka i-DVD yindaba yokuthandayo.
Ngobusuku obumnandi nomlingani
Uma emva kokuthandana okuphumelelayo nesigaba esilandelayo se-infatuation yokuqala, ukuphila kwansuku zonke kuzuza kancane, izikhathi ezivamile zothando zibaluleke kakhulu.
Ngakho-ke ukuthi imizwa yothando ingathinti, kufanele ugweme amanye amaphuzu. Akufanele ukhulume ngezinkinga nezinkathazo. Ukuchazwa akusho ukumiswa okwesikhashana - kunesikhathi salo ngolunye usuku.
Ukuze kisses ukuhlangabezana nothando, umoya omubi kufanele kugwenywe. Ukudla negalikhi noma anyanisi akufanele kube semenyu. Ngesimo sengqondo esibi, ngeke futhi sibe nobusuku obunothando. Uma lokhu kungenakufika ngesikhathi, kufanele uyihambise kangcono.
Okubaluleke kakhulu ukugcina isikhathi, ukuze kusihlwa kungase kuqale ukuthanda ngempela futhi ngaphandle kokucindezeleka. Ukusebenza isikhathi esengeziwe kungcono ngolunye usuku.
Futhi uma into efika ngempela phakathi noma iguqula isimo sengqondo, akufanele usaphazamise isimo sengqondo. Ithuba elisha lobusuku obuseduze luzobuya maduzane.
Futhi uthanda lokho?
Umehluko yobudala ebuhlotsheni
Xoxa nentombi noma umngane
Umbulali wobudlelwane - ukulimala kwezinambuzane
Wedding Planner Amathiphu & Info for umshado ophumelelayo
Ukubambisana - yiziphi izinguquko ezinganeni?
Umama nobaba eholidini ngaphandle kwezingane
O othandekayo, usuku luka-Valentine
Izinkondlo zobuciko zezintombi noma umngane
Ukudla kwe-Erotic kokubili
Dinner ye-Erotic for ezimbili
Phinda uvuselele uthando
Amasonto onke amaRoma
Lisho ukuthini igama lasemfuyo?
Inkondlo yothando - uthando nokulangazelela
Inkondlo yothando - wena nami
Lapho umngane omkhulu engaba uthando
Ubulili ekuphileni kwansuku zonke
Ukugeza kanye nomngane noma intombi
Thatha kanye nomngani noma umngane
Ubuningi ekuphileni kwansuku zonke
Ukukhanya - Ukushaya indlwabu kuhamba kanjani?
Isakhiwo nokusebenza kwamabele amabhinqa
I-orgasm yesifazane nezinganekwane
Iseluleko socansi esivela ochwepheshe
Ukushaya indlwabu ebuhlotsheni = ukukhwabanisa?
Ukudlala indima nobulili
Soulsex - isifiso esisha somlingani
Ubulili bokubuyisana - okufanele busebenze?
Ikhasi elihle lokubala lomama abesifazane
Imibala Ebalalayo Yombala Amadoda Namabhangqwana
Amakhasi e-color yoga yoga
Umdwebo womsebenzi wachaza isinyathelo ngesinyathelo
Ulahlekelwa izihloko mayelana nobambiswano nobulili? Khuluma nathi.
Amathiphu Engadini - Garden Garden